Uphucwe amandla umasipala | Isolezwe
Uphucwe amandla umasipala
Izindaba / 14 January 2018, 11:10am / MLUNGISI GUMEDE
UNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube
UPHUCWE amandla uMasipala waseMooi-Mpofana eMooi-River obukhungethwe yizinkinga ebezidala ungakwazi ukuyisa izidingo emphakathini.
UNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, ngoLwesine usebenzise isigaba 139, ephuca lo mkhandlu amandla. Uqoke uMnuz Martin Sithole njengomlawuli wawo.
“Lokhu ngeminye yemizamo yethu eminingi yokungenelela ekuxazululeni izinkinga ezidala ukuthi lo mkhandlu ungakwazi ukusebenza,” kusho uNkk Dube-Ncube.
Uthe lo mkhandlu ubukhungethwe yizinkinga ebezidala imibhikisho yomphakathi, iziteleka ezingekho emthethweni zabasebenzi nokucekelwa phansi kwezakhiwo zomphakathi.
Uxwayise ngokuthi uma isimo singashintshi bazophoqeleka ukuthi umkhandlu bawuhlakaze.
UMkhandlu waseMooi-Mpofana uthole umbiko omubi kunayo yonke obizwa nge-disclaimer kumncwaningi mabhuku kwisabelo-mali sanyakenye.
Bekunovalo lokuthi lo mkhandlu uzophinde uthole umbiko omubi njengoba bezingekho izinkomba zoshintsho.
UNkk Dube-Ncube uthe kusuka ngo-2012, lo mkhandlu awusebenzi ngendlela efanele.
Uthe ngo-2014, baphoqeleka ukuthi bagcine bewuhlakaza lo mkhandlu njengoba ubumbeke kabusha ngemuva kokhetho luka-2016.
“Sizimisele ngokusilungisa isimo somkhandlu kodwa sizodinga ukuthi zonke izinhlaka zibambisane ukuze kube noshintsho, sifuna ukuxwayisa ngokuthi uma isimo singashintshi lokho kungaholela ekutheni sithathe ezinye izinyathelo ezinzima,” kusho uNkk Dube-Ncube.
Uthe isimo sezimali zomkhandlu asisihle. Uthe umasipala uyakweleta, usengcupheni yokunqanyulelwa ugesi.
Ukungezwani kwekhokhasi ye-ANC okuyiyo ehola lo mkhandlu ngezinye zezizathu okuthiwa zidala ukuthi umasipala ungakwazi ukusebenza. Kuthiwa ikhona neminye imikhandlu engenzi kahle esengcupheni yokuphucwa amandla.